Erayo jaceyl oo dareen leh misana qalbiga taabanayo - Cishqi.com
Sida loo soo jiito qofka aad jeceshahay waa wax fudud, kaliya u diro erayo jaceyl oo dareen leh gaar ahaan kuwa soo socdo oo kale. Marka aad u dirto erayadaan waxaad arkeysaa iyadoo aad kuu xiiseyneyso. Hadaba goormee la diraa erayo jaceyl oo dareen leh?
Jawaabta macquulka ah: Marka ay sheekadu meel mac mareyso ayaa loo dhex geliyaa, qaasatan marka aad ka sheekeyneyso dareenkaaga sida uu yahay.
Qormadaan qormadii ka horeysay waxaan bogeenna Cishqi ku soo qaadanay erayo kale oo dareen leh qaasatan erayadaan: Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh.
Kumanaan qof ayaa laga yaabaa in ay kuu soo diraan fariimo jaceyl laakin fariinteydu waa mid kuwaas ka duwan, maxaa yeelay waxay sidataa dareen farxad leh.
Erayo jaceyl oo raga dareen gelinayo
Sir makuu sheegi karaa? Waxaan ahay qof adiga kugu waashay.
Kulankeenii ugu horeeyay ee aan kulanay, waxaan ku fikiray in aad tahay ninka ugu degan, ugu akhlaaqda wanagsan, uguna quruxda badan aduunka. Hadda waxaan arkaa inaad ka qurux badan tahay ninkaasi, maxaa yeelay waxaad dhameytirtay nolosheyda.
Waad ku mahadsantahay inaad noqoto saaxibkeyga, jaceylkeyga iyo halyeeygeyga. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula qaato cimrigeyga inta ka dhiman nolosheyda.
Inaan noqdo xaaskaaga waa farxada nolosheyda, waa iftiinka qalbigeyga, waad ku mahadsantahay inaad aniga idooratay, Ninkeyga.
Qish, baro erayo kala oo dareenka raga kiciyo
Mcnto jacaylka aan kuu qaaday ma ahan wax la dhalaysan karo oo dheel dheel noqon karo, murugada iyo walbahaarka i haysto waxa iiga daran mar kasta oo aan is dhaho seex oo aan indha isku qabto waxaa la i horkeenaa sawirkaaga soo jiidashada leh, markaas ayaan baraaruga aadna u xanuunsadaa, Indhahaygana ay ilmo kusoo istaagtaa, waxan ka baqayaa in aan nolosha ciriiri ku dhamaysto maxaa yeelay qof aan adiga ahayn iima muuqdo.
Erayo jacey a-z
Waxaan aad ula ildaranahay jacayl aan la kaliyoobay , xili kasta waxa ka fikiraa qof aan niyad ii yahayn Alla dhib badanaa marka uu jacaylku kugu keliyaysto.
Ku jecliyaa dadkana kugu jecliyaa runtiina waxaan ka warwaraaya sidaan u noolaan doono adiga la’aanta marwalbaana waxaan ahaan doona mid adiga uun kaa fikira.